Denmark oo Fureysa Qeybaha ugu muhiimsan Wadanka gudihiisa ( Akhriso ) Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaDenmark oo Fureysa Qeybaha ugu muhiimsan Wadanka gudihiisa ( Akhriso )
Denmark oo Fureysa Qeybaha ugu muhiimsan Wadanka gudihiisa ( Akhriso )
April 6, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Denmark 0
Photo/ Johan Nilsson/TT
Danmark waxay fududeysay xayiraadaha. Laga bilaabo Talaadada maanta, goobaha qurxinta iyo kuwa timaha jraha , solariums, iyo iskuulada wadista gawaariada ayaa dib loo furi doonaa.
Waxbarashada fogaanta ayaa qayb ahaan la joojiyay – ardayda dhigata fasalada 5-8 iyo kuwa gala dugsiga koowaad iyo labaad ee dugsiga sare ayaa loo ogol yahay inay dib ugu noqdaan dugsiga waqti dhiman.
Iyadoo la tixraacayo tacliinta jaamacadda, ardayda mastarka ee leh waxyaabo badan oo wax ku ool ah barnaamijyada ayaa soo laaban kara . Ardayda kale waxay ku laaban karaan jaamacadaha boqolkiiba 20. Markii hore, dhammaan waxbariddu waxay u dhici jireen qaabka fogaanta.
Kuwa baranaya waxbarashada xirfadaha waa inay awoodaan inay dib ugu noqdaan iskuulada waqti buuxa..